Global Voices teny Malagasy » Taratasim-pifandraisan’ny mpandika: Fototry ny Teny, Mandika an’i Eoropa, sy zavatra maro hafa! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Jona 2019 15:50 GMT 1	 · Mpanoratra Marianna Breytman Nandika Sylvia Aimée
Efa mba nanontany tena angamba ianareo ny amin'izay mampiavaka ny olombelona amin'ny biby hafa? Noraisin'i Paul Ibbotson sy Michael Tomasello io fanontaniana io ao anatin'ìty lohahevitra ity, ao amin'ny The Guardian ary iresahana ireo lohahevitra mikasika ny teny, miainga avy amin'ny gramera ka hatramin'ny harentsaina fahaizana mamanta-javatra iraisan'ny rehetra, ary zavatra maro hafa. Vako ato  ny momba an'izay!
Fantaro bebe kokoa ato  ny momba ilay hetsika, ary ato anatinity lahatsary  fohy ity koa!
Raha mety tsy tonga tao an'reitreritrao fa ny olombelona no mbola mpandikateny tsara indrindra noho ny Google, nanapaka hevitra ny ElaN Languages hampahatsiahy antsika ny amin'izay! Namorona lahatsary iray ry zareo nomeny lohateny hoe “Andran-tsira amin'ny fandikànteny”, ampisehoana “lehibe-na toeram-pahandroan-tsakafo iray (chef cooking) ny fomba fikarakaràna sakafo Japoney mitovy izao , saingy nadikan'ny tarik'ireo olombelona manampahaizana avy amin'ny ElaN ary nampitahaina tamin'ny vokatry ny milina mibaiko tena an'ny Google Translate”. Jereo anie ato e !
Mba hitondrana tsikitsiky kely ho antsika ankoatra ireo vaovao mahasosotra rentsika tanatin'ny herinandro, nihevitra aho fa tsara raha faranana aminà asa fandikànteny mahatsikaiky ity taratasin-pifandraisan'ny herinandro ity, atao anaty lalao an-dahatsary. Ny What Culture no nanambatra ity lisitra ity  hahazoanareo fahafinaretana eo am-pitsikiana, koa dia ankafizo ary mirary Talata feno fifaliana!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/13/140329/
 ato e: http://www.adweek.com/news/advertising-branding/translation-sites-clever-recipe-taste-test-shows-how-wrong-google-translate-can-be-168170
 ity lisitra ity: http://whatculture.com/gaming/15-hilarious-translation-fails-in-video-games.php/4